साथीको खुसीमा रमाएकी म | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
साथीको खुसीमा रमाएकी म
२०७५ असार १८, सोमबार १०:४१ गते
अलिअलि याद छ, रातो कुर्ता सुरूवालमा हुनुहुन्थ्यो । अलि बिसञ्चो थियो क्यारे, शरीरलाई आराम दिइरहे जस्तो गरी शरीर ढल्किएको थियो, अफिसको रिसेप्सन कक्षमा । त्यतिबेलाको अफिस रेडियो माडीको भवन । ‘तपाईं निर्मलाजी हो ?’ यही वाक्यसँगै सुरू भएको हो हाम्रो कुराकानी अनि सम्बन्ध । होइन, मेरो नाम मीरा हो । मलाई दीपक दाइले बोलाउनु भा’थ्यो । त्यही त हो मेरो बोली मिलाएर बोलाउनु भएको थियो भन्न कहाँ जान्नू । दीपक दाइ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि थपिथपाउ गरेर भनिदिनुभयो, ‘लोकगीत गाउँदी रै’छन् बैनीले । त्यसैले दोहोरी साँझको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भनेर बोलाएको ।’ मेरो प्रतीक्षा भने देव सरको थियो । त्यसैले अरू खासै कुराकानी भएन, हामीबीच त्यसदिन ।
रेडियोमा मेरो भ्वाइस टेस्ट रेकर्ड भइसकेको थियो । रेडियो सुन्ने गरेकोमात्रै । बोल्ने कसरी थाहा थिएन । दीपक दाइले अँध्यारो कोठा देखाएर ल यहाँ बसेर कार्यक्रम चलाए जसरी बोल त भन्नु’भो । म पनि कानमा हेडफोन लाएजसरी सररर बोलेँ । कस्तो भयो केही थाहा भएन । केही बेरपछि देव सर आउनुभयो अनि उहाँसँग कुराकानी भयो । उहाँले मेरो आवाज सुन्ने भन्नु’भो । दीपक दाइले ल्यापटपमा रेकर्ड भएको मेरो आवाज सुनाइदिनुभयो । म झस्किएँ । ला अब के भन्नुहोला । सुनिसकेपछि देव सरले मलाई इङ्गित गर्दै भन्नुभयो, ‘बैनीको कार्यक्रम चलाउने शैली र बोल्ने शब्दहरू सबै ठीक छ । तर, एउटा कुरा मात्रै सुधार्नुपर्ने देखियो ।’
अहो ! के होला भनेको त बैनीले यति छिटो बोल्नुभयो कि आधा बुझियो आधा बुझिएन । त्यहाँ हुनुभएका सबैजना हाहाहा… गर्दै हाँस्नुभयो । मैले मेरो सानैदेखिको बानी हो, कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेँ । त्यो दिन मंगलबार थियो तर, त्यही हप्ताको बिहीबारदेखि नै कार्यक्रम चलाउनु पर्ने भयो । मैले यति गर्दा कम्ती गाली खा’को होइन घरमा । कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षाको लागि तयारी कक्षा चलिरहेको थियो । र, पनि खै कसरी कसरी ? समय म्यानेज भयो । यसरी मैले रेडियोमा प्रवेश गरेकी थिएँ । जुन यात्रा अझै पनि जारी छ । त्यसपछिका दिनहरूमा कहिले रेडियो अगाडिको चटपटको ठेलामा त कहिले वसन्तपुरको चौरमा । कहिले कहाँ, कहिले कहाँ हामी सँगै देखिन थाल्यौँ ।
आत्मीयता पनि बढ्दै गयो । नबढोस् पनि कसरी ? मनैदेखि हाँस्ने अनि मीठो कुराकानी अझ भनौँ, ललिते बोली । सबैभन्दा राम्रो पक्ष साँचो मन, यस्तैयस्तै व्यवहारले लोभ्याएको थियो मलाई । नाता अनि सम्बन्ध भनेको एकै परिवारभित्र मात्रै सीमित हुँदोरहेनछ । रगतको साइनोले मात्रै सम्बन्ध कायम हुँदोरहेनछ । सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध त मनभित्रको कुरा साट्न मिल्ने अनि बुझ्नेसँग पो हुने रै’छ । मलाई अझै याद छ, मैले बिर्सिए पनि खाजा खाइस ? भनेर सम्झाएका कुरा । कुन दिन पानी नखाइनखाइ मर्छेस् भन्दै थर्काउँदै पानी खा भनेका कुरा पनि दिमागमा ताजै छ । अनि यो पनि सम्झनामा ताजै भएर बसको छ कि दिदी टाउको दुख्योभन्दा मर के मर आफ्नो शरीरको ख्याल राख्ने होइन, कहिल्यै टाउकोमा तेल ला’को देख्दिनँ । घामपानीको मतलब छैन, भन्दै समातेर नाइँनाइँभन्दा नि टाउकोमा तेल लगाइदिएर मसाज गरिदिएका कुरा । याद छ, सबै कुरा याद छ मलाई । साँच्चिकै तपाईं साथमा भएपछि मैले आफूलाई भुलिदिए पनि हुन्थ्यो । किनकि मेरो सानो सानो कुरा ख्याल राख्ने तपाईं जो हुनुहुन्थ्यो ।
यो सात वर्षको बीचमा मेरो जीवनमा उतारचढाव नआएका पनि होइनन् । हाम्रो सम्बन्धमा धमिरा लगाउन खोज्ने बिषालु जीवहरूले भरपुर कोसिस गरेकै हुन् । केही हदसम्म सफल भए पनि । तर, चरी साँझ परेपछि गुँडमा नगई कहाँ जान्थ्यो र ? हामीसँगै हिँडेको, खाएको, बसेको देखेर नानाथरी कुरा काट्नेहरूलाई दयाभाव देखाउँदै हामीले एकअर्कालाई विश्वास ग¥यौँ । त्यही विश्वासको भरमा आजसम्म हाम्रो सम्बन्ध जीवित छ । नत्र हालखबर सोध्दा बढाएर कुरा काटेकी थिई भन्नेको के कमी थियो र ? यही बीचमा मैले जन्मभूमि छोडेर केही नयाँ खोजका लागि भरतपुर जाने निर्णय गरेँ ।
असार १ गते भरतपुर पुगेकी म ४ गतेदेखि नै फेरि अर्को गन्तव्यसँग जोडिनुपर्ने थियो । मनमा अनेक योजना भए पनि संघर्ष नगरी कहीँ जोडिने संभावना थिएन । तैपनि चितवनको पहिलो रेडियो सिनर्जी एफएमसँग मेरो नयाँ नाता जोडिन पुग्यो । भरतपुर र माडी दूरीको हिसाबले टाढा रहे पनि तपाईंको अभावले झस्काइरहन्थ्यो मलाई । सुरूवाती दिनमा नयाँ–नौलो हुँदा झन् धेरै सम्झिएँ मैले । यो ठाउँ अनि सहर विलकुल नयाँ थियो मेरो लागि । तर, पनि मैले सबैसामु आफूलाई घुलमिलाएँ । केही समयमा त हाम्रो भेट भइहाल्यो नारायणी नदी किनारमा । तर, त्यतिबेला हामीमात्रै भएनौँ, हामीसँगै भावना मिल्ने प्रीति र अशोकजी पनि हुनुहुन्थ्यो ।
मलाई अलि सञ्चो नभएकोले मैले साथीमात्रै बसिदिएँ । उहाँहरूले रमाइलो गर्दै चटपट, पानीपुरी, आइसक्रिम खानुभयो । तर, त्यहाँबाट फर्किँदा भने हामी दुईजनामात्रै भयौँ । अनि त सुरू भए मनका वह पोख्न । अचम्म गफैगफमा हामी हिँड्दाहिँड्दै नारायणी किनारदेखि भरतपुरको त्रिचोकसम्म आइपुगेछौँ । खुसीको कुरा, त्यो रात हामीसँगै बस्न पाउने भयौँ । अनि भोलिपल्ट छुट्टिनुपर्ने समयको सदुपयोग गर्दै राति अबेरसम्म कुरा गर्दै बस्यौँ । कुराकानी गर्दागर्दै कतिखेर निदाएछौँ पत्तै भएन ।
खैर छाडौँं यी सब कुरा । आज म यति धेरै खुसी छु, जुन खुसीको लागि हामीले धेरै प्रतीक्षा गरेका थियौँ । बाल्यकालमा कतै ठेस लागेर लड्दा पनि बाबाआमा दुवैको मीठो साथ पाइन्छ । तर, विवेकशील भइसक्दा भने जब मनमा ठेस लाग्छ, तब मलमपट्टीभन्दा नुनचुक छर्कन हतार गर्ने अलि ज्यादा भेटिन्छन् । मीठो बोली बिकाउने र यसो राम्रो, उसो राम्रो भन्दै आदर्शको ढोङ्ग ओढ्नेले नै जीवनमा पटकपटक लडाउन खोज्छन् । धेरै नमीठा पल भोग्नुभएको छ जीवनमा । यदि तपाईंको ठाउँमा म आफँै पनि हुन्थेँ भने कतिपय गलत कदमले जीवन अर्को मोडमा हुन्थ्यो होला सायद । आशा र जिउने भरोसाको एउटा बलियो त्यान्द्रो आएको छ जीवनमा । अब त्यसलाई मलजल गरेर बलियो रूख बनाउनु पर्नेछ, जसले लड्न खोज्दा आड दिइयोस् । त्यो खुसी आउन लागेको खबर तपाईं आफैँले पनि ढिलो गरी थाहा पाउँदा अनि सबैभन्दा पहिला मलाई नै सुनाउन मन लागेर कापेको स्वरमा फोन गर्दै एउटा कुरा भन्नु छ, एउटा कुरा भन्नु छ, भन्दै भन्नै नसकेको पल ।
अहो ! कति खुसीयालीपूर्ण थियो त्यो पल । मैले ज्यादै जिद्धि गरेपछि बल्लबल्ल भन्नुभएको थियो, लुरी तिमी मेरो बेबीको सानीमा बन्दैछौ । म त अवाक् भएँ । केही बोल्नै सकिन । केही भन्नै आएन एकछिन त । तर, खुसी आइसकेको थियो । ‘सरलाई सुनाउनु भयो त ?’ मैले सोधेँ । ‘होइन सरलाई फोन गरेको थिएँ, व्यस्त हुनुहुँदोरहेछ म्यासेज छोडेकी छु । अनि तिमीलाई नै भनेको,’ उहाँको उत्तर यस्तो आयो । बाबाममी, भाइबहिनी कसैलाई नसुनाउँदै मलाई सुनाउनु भ’को खबर पाएपछि म पनि मख्ख भएँ । त्यतिमात्रै हो र ? म त डबल खुसी भएँ । अनि बधाई दिएसँगै एकछिन रमाइलो कुराकानीपछि फोन राखियो ।
अनि पो म बक्बकाउन थालेँ । वरपर सोल्टिनीहरू थिए । उनीहरूलाई नै सुनाएँ । म ‘अप्पु’को बेबीको सानीमा बन्दैछु । त्यसपछिको समयमा हाम्रो केहीमात्रै भेट भयो । दूरीको टाढा भए पनि सधैँजसो फोन, म्यासेज आदिमा हाम्रो नियमित कुराकानी भइरहन्थ्यो । लास्ट टाइम भरतपुर आउँदा भने मैले भन्ने बाटो पारेकै हो । किनकि परिस्थिति त्यस्तै थियो । जो मैले हजुरलाई सुनाएको थिएँ । तर, छड्के सुन्नुपथ्र्यो । हजुरले सधैँ आज को–को आए त नि हजुरलाई भेट्न ? त्यो को–को भने अरू कोही नभएर मै थिएँ । मलाई थाहा छ । तर, पनि मैले दोष मेटाउन सकिनँ । यति सम्मकी हस्पिटलमा नगएपछि भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्यो, दिदी माया लाग्छ तिम्रो भन्न । बाबु जन्मिएको खबर फेसबुकबाट थाहा पाएँ । खुसीको सीमा रहेन । मैले त मेरो साथीहरूलाई पो भनेछु । लौन मलाई बधाई दिनुस् । ट्वाल्ल पर्दै किन भन्थे साथीहरू । अनि मैले भनेँ, ‘अपेक्षा दिदीले बाबु जन्माउनु भयो क्या ।’
अपेक्षाले बच्चा जन्माउँदा तिमीलाई चाहिँ किन नि बधाई ? त्यो किनको जवाफ मसँग थिएन दिदी । किनकि त्यो दिन मलाईभन्दा धेरै हजुरलाई थाहा छ । सँगै रहँदा बस्दा धेरै भावना र आत्मीप्यता साटिएको छ हाम्रो । एकअर्काको मनको कुरा र पीडा साटेका छौँ हामीले । मलाई आफ्नै सम्झिएर हरेक सुखदुःखमा मर्म साट्नुभएको छ हजुरले । अनि मैले पनि हरेक पलको जीवन्त कहानी सुनाएकी छु हजुरलाई । त्यसैले त हाम्रो सम्बन्ध महिनौँपछि भेट भएर कुरा गर्दा पनि पराई नसोचिने केही खास छ, केही विशेष छ । बाबु जन्मिएको दोस्रो दिन नै गएको थिएँ म । तर, कहाँ हुनुहुन्छ थाहा नपाई बाहिरबाटै फर्किनु प¥यो ।
त्यसैले हामीले तेस्रो दिनमा मात्रै भेट्न पायौँ । भेटिएदेखि नछुट्ने बेलासम्म मैले तपाईंको मुहारमा आमा बन्नुको खुसी नियालिरहेँ । अनि मनमनै सोचेँ साँच्चै आज ‘अप्पु’को जीवन साँच्चिकै सार्थक भएको छ । अनि बाँच्नुको नयाँ आयाम थपिएको छ । त्यो खुसी अब कहिल्यै ठुस्सिएर पनि पराई नहोस् । जीवनको नयाँ गोरेटो सुरू भएको छ । यो अध्यायमा सफलता, खुसी र साथ सधैँ मिलिरहोस् । आत्मीय मान्छेलाई मनैदेखि बधाई तथा शुभकामना !